प्रधानमन्त्रीज्यू, घोषणापत्रमा त यस्तो पो रहेछ ! – Bignewskhabar.com
'दोस्रो वर्ष काठमाडौंमा पेट्रोलियम वाहन प्रतिस्थापन गरिनेछ'
बिगन्युज । ३ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०६:३६ मा प्रकाशित
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भोलि (शनिबार) दुई वर्ष पूरा भई तेस्रो वर्ष प्रारम्भ हुँदैछ । दुई वर्षको अवधिमा सरकारले के-के गर्‍यो त ? यसबारे टाउको दुखाउनुभन्दा २०७४ सालको चुनावी घोषणा पत्रमा के-के लेखिएको थियो, त्यो पढ्दा मज्जा आउँछ । तत्कालीन एमाले र माओवादीले साझा घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडेका थिए । घोषणापत्रमा वामपन्थी सरकार बनेपछि गरिने एक वर्षे, दुई वर्षे, तीन वर्षे, चार वर्षे, पाँच वर्षे र १० वर्षे कार्यक्रमको फेहरिस्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
पाँचवर्षे चुनावी घोषणापत्रमा सरकारले १० वर्ष वा चार/पाँच वर्षमा गर्ने कामहरु घोषणापत्रमा थुप्रो छन्, त्यतातिर अहिल्यै नजाऔं । तर, एक वर्ष वा दुई वर्षभित्र गरिसक्ने भनिएका कामहरु घोषणापत्रमा के-के थिए ? जनतालाई दिइएका ती आश्वासन कति पूरा भए, कति भएनन् ? अहिले यसबारे मात्रै चर्चा गर्दा ओली सरकारमाथि न्याय होला । नेकपाले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा दुई वर्षभित्र के-के गरिसक्छु भनेर जनतालाई आश्वासन दिएको थियो ? ती आश्वासन कति पूरा भए, कति खोक्रो नारामा परिणत भए ? आउनुहोस्, यसबारे रौंचिरा विश्लेषण गरौं-